induction brazing uye inotengesa tekinoroji inotsigira uye inogadzira
HLQ Induction Kuchenesa mafashoni ari kukosha akawedzera masisitimu ayo anokwanisa kukodzera zvakananga mukati mekugadzira sero, kudonhedza chakafunzwa, marara, uye pasina basa remwenje. Masisitimu anokwanisa kugadziridzwa kuitira manyowani control, semi-automated, uye yese nzira yekukwira yakazara michina masystem. HLQ induction inoongorora uye masisitering emagetsi anodzokorora kupa yakachena, isina-majoini majoini ezvikamu zvezvikamu zvinosanganisira mafuta mafiriji, kupisa vanachinja, gasi vanogovera, manifolds, carbide tooling, nezvimwe.
Nheyo dzeInduction Brazing & Soldering
Induction Brazing Filler Zvishandiso
Induction Brazing filler masimbi anogona kuuya akasiyana siyana mafomu, chimiro, saizi uye alloys zvichienderana nebasa ravo rekushandisa. Ribhoni, mhete dzakachinjika, pasita, waya uye yakagadziridzwa ma washers ingangove mishoma yezvimiro uye mafomu alloys anogona kuwanikwa.
Kugadziriswa kupisa kwaratidza kuve chinhu chakakosha kubatsira mukujoinha kuita kwezvikonzero zvakawanda. Kurumidza musoro uye chaiyo yekupisa kudzora inopa mukana weiyo localized kupisa yezvakakura simba zvikamu zvisingaiti zvikuru kuchinja zvinhu zvemukati. Iyo inobvumirawo kutarisa kweyakaomeswa zvinhu zvakaita sealuminium uye zvinoteedzana, kuwanda-kugovera kutarisisa uye kutengesa kwemasanganisi epedyo.
Kupinza kupisa mukutarisa uye magetsi emagetsi zvinoshandiswa zvinogadziriswa nyore nyore kune nzira dzekugadzira, kubvumidza kurongeka kwemaitiro emidziyo mumutsara wekereke, uye kana zvichidikanwa, kupisa nekudzora kure. Kazhinji, kuiswa kwekushambadzira uye kugadzira magetsi kunobvumidza kudzikiswa kwehuwandu hwekugadziriswa kwezvikamu, nekupisa kushoma kwezvigadziriso zvinowedzera nguva yehupenyu uye kuchengetedza iko kwakaringana mukuenderana kwezvinhu izvo kuti zvisanganiswe. Sezvo vashandisi havafanirwe kutungamira induction yekupisa sosi, maoko ese ari maviri akasara akasununguka kugadzirira magungano ekubatana.
HLQ induction ichiona michina inoburitsa mhando, kuwirirana, kurongedzwa kuburikidza nekushandurwa-nekukurumidza kugadzirisa-pamusoro pekushandisa kwakasiyana siyana zvinodiwa zvekugadzira. Iyo Radyne induction yekutarisa uye inotengesa chigadzirwa mutsara inopa yakajairwa mhinduro dzekutarisa:
Categories FAQ, Technologies Tags high frequency brazing, induction brazer, kuburitsa kusungurudza, kuburitsa kusungurudza mhangura, induction brazing machine, induction brazing mugadziri, induction brazing system, induction kuchenesa zvikamu, induction soldering, MF kubheka, MF ichiona michina, radio frequency brazing, radio frequency kutengesa, RF kutengesa kushandiswa Post navigation